सहकारीलाई जनताको हितमा सार्थक सदुपयोग गर्न सके
२०७७ चैत्र १९ गते , विहीवार प्रकाशित
बिश्वमा जुन परिप्रेक्ष र पृष्ठभूमिमा सहकारीको शुरुवात भएको हो त्यसको मर्म अन्तर्यलाई आत्मसात गरिएन भने जतिसुकै सहकारी फैलिए पनि र चले पनि त्यसको कुनै सार्थकता हुदैन । सहकारी अभियन्ताहरुले बुझ्नुपर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा नै आज यही हो । हाम्रो समाजमा सहकारीको अर्थ–सामाजिक रुपान्तरणमा जुन योगदन पुग्नु पर्ने हो र त्यसका लागि जसरी सहकारीहरु चल्नु पर्ने हो त्यसरी चल्न नसकेको, नचलेको या केवल नाफामूलक प्रबृत्ति नै हावी भएको र अझ कतिपय सहकारीले त चाँजोपाँचो मिलाएर करोडौं करोडको ठगी धन्धा चलाएको समेत कारणले गर्दा सहकारी फैलिए पनि ‘जे पनि हुन सक्तछ, भन्ने तिनमाथि आशंकायुक्त नजरले नै हेरिने गरेको छ । यो एकदमै स्वभाविक पनि हो ।
इतिहास हेर्दा मजदूरहरुमाथि पूँजीको अत्याधिक शोषण र शासनका बिरुद्ध गरीब र स–साना पूँजी भएका मजदूरहरुले अर्थात् ती मजदूर बर्गका २८ जना अग्रदूतहरुले श्रमिकहरुको नाजुक अबस्थालाई परस्पर मिलेर चिर्न यो सहकारी आन्दोलनको सूत्रपात गरेका हुन् र उनीहरुले एउटा नयाँ – समानतामा आधारित समाजको नब निर्माण गर्ने – सपना देखेका हुन् भन्ने कुरा सहकारी अभियन्ताहरुले बिर्सन हुदैन र बिर्सन मिल्दैन । मजदूरहरुको दयनीय र कठोर अबस्थाबाट मुक्ति यस अभियानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मानबीय र उन्नत लोकतान्त्रिक मूल्य मन्यता रहेको यथार्थलाई बुझिएन भने सहकारी पनि आर्थिक शोषण र मुनाफाखोरीको अर्को नाम मात्र भएर सीमित हुन पुग्दछ भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ ।
निश्चय पनि आज बिश्वभरी नै सहरकारीको जुन सञ्जाल र बिशिष्टीकरण छ त्यसले के उजागर गर्दछ भने यसको उपादेयता, प्रयोजनीयता र ठूलो महत्व रहेको छ । यसको सदुपयोग हुँदा उन्नत अर्थ–सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान दिन र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न यसले मद्दत गर्दछ । तर यसलाई एउटा समूह गठन गर्ने र त्यसका सदस्यहरु हित हेर्ने सीमित कुरामा मात्र यसलाई लिइनु हुदैन । सहकारीलाई न्यायपूर्ण, आर्थिक गतिबिधिको एउटा महत्वपूर्ण औजारकोरुपमा ग्रहण गर्न सक्नु र त्यही अुनरुपको ब्यवहार गर्न सिक्नु पर्दछ । अन्यथा ‘नाम सहकारीको काम अर्कै थरीको’ हुन जान्छ, जसले गर्दा बिकृति जन्मिने र अनेक किसिमका गुढ लगाउने काम गर्दछ । यस्तो बिसंगतिबाट जोगिनु र यसलाई सही दिशा दिइरहनु आजको हाम्रो देशको सहकारी अभिायनको ज्वलन्त चुनौतिको राष्ट्रिय बिषय हो ।
निश्चय पनि बद्लिदो बिश्व परिप्रेक्ष र राष्ट्रिय आवश्यकताको बिशिष्टीकरणको सन्दर्भमा यस सहकारीको अभियानको पनि चरित्र बद्लिन्छ नै । ‘श्राद्धमा बिाराले बाध्ने’ उखान जस्तो यसलाई पुरानै ढर्रामा रोकेर राख्न या चलाउन कसैले पनि सक्तैन र त्यसो गरिनु उचित पनि हुन्न । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बद्लिदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार यस अभियानका अनेक आयामहरु अबश्य हुन सक्तछन् र हुनु नै पर्दछ । तर यसलाई कुनै पनि हालतमा शोषण र ठगीको माध्यम बनाइनु, बन्न दिइनु हुदैन । सही अर्थमा सहकारीमा लागेका सबैले सहकारी बारेमा आज चिन्तन र चिन्ता गर्नु पर्ने मूलभूत बिषय नै वास्तवमा यही हो ।
वास्तवमा सही र सशक्त सहरकारी आजको आवश्यकता हो । यसै दिशामा सहकारी अभियानलाई प्रयुक्त, परिचालन र यसका मूल्य–मान्यताहरुको सही परिपालन गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मात्र यसको आरम्भ गर्ने र बिश्व समाजलाई सन्देश दिने सहकारी अभियानका अग्रदूतहरुको पनि सम्मान गरेको ठहरिने छ । त्यसैले यो अभिायनमा संलग्न सरकारी गैर सरकारी सबै सरोकारवाला संघ÷संस्थाहरुले आज गम्भीर आत्म समीक्षा गरेर अघि बढ्ने साहस, धैर्यता र तत्परता देखाउन सक्नु पर्दछ । सहकारीको मर्म अनुसार यसलाई सञ्चालन गर्दा कसैलाई घाटा हुदैन । अन्ततोगत्वा फाइदा नै हुन्छ । यसलाई ‘तातै खाउँ जली मरुँ’ भन्ने किसिमले रातारात फाइदा उठाउने माध्यम बन्न नदिऔं र नबनाउँ ! त्यसो गर्नका लागि सम्बद्ध सबै र खाशगरी सरोकारवाला नियमनकारी निकायहरुले सही अनुगमन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
बिश्व पूँजीवादमा अन्तरनिहीन गम्भीर संकटले बिश्व समाज अप्ठ्यारो र संकटापन्न अबस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पूँजीवादको यस चरित्रले बहुसँंख्यक जन साधारणको जीवन अझ कष्टप्रद बनाउँदछ र बनाउदै आएको छ । जन साधारणले पाउने सामाजिक सेवा र सुबिधाहरुको कटौति आजको आम वास्तविकता बन्दै गएको छ । यस स्थितिबाट जोगिन,बच्न तथा जीवनका आवश्यकताहरुलाई धान्न र तिनको गुण स्तरीयतालाई पनि कायम राख्नका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आधारहरु छन् । यसै दिशामा अभिमुख हुन ६४औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सबै भयिन्ताहरुलाई शुभकामना छ !
विगतकै बोझ बोकेको नव वर्ष
साझा सुदृढ बिश्व–स्वास्थ्य संकल्पनै महामारीको समाधान
सहकारीको भावनालाई सार्थक तुल्याऔं